Gbochie ọdịda ụlọ akwụkwọ n'ụlọ | Nhazi na ọmụmụ ihe
Maite Nicuesa | 14/01/2022 23:40 | Emelitere ka 14/01/2022 23:44 | Atụmatụ
Ọchịchọ maka ihe ọmụma, ịhụnanya nke ịgụ akwụkwọ na ọchịchọ ịmata ihe bụ ihe ndị nwere ike ịzụlite n'ụlọ. Otu esi egbochi ọdịda ụlọ akwụkwọ si n'ụlọ? Na Ọzụzụ na Ọmụmụ anyị na-ekerịta echiche ụfọdụ.
1 1. Na-enwe mkparịta ụka mgbe niile na etiti
2 2. Ịga ụlọ akwụkwọ ịzụ ụmụ
3 3. Na-akwalite nkwalite dị mma gbadoro anya na mbọ
4 4. Kwalite nzukọ na akwụkwọ n'ụlọ
5 5. Chọọ ihe ngwọta
6 6. Soro na-achọ ọrụ aka
1. Na-enwe mkparịta ụka mgbe niile na etiti
Ndị nne na nna nwere ike itinye aka ka ha na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nọgide na-enwe nkwurịta okwu chiri anya. Mkparịta ụka a nwere mmetụta dị mma na nwa akwụkwọ ahụ n'onwe ya. Buru n'uche na ụgbọ elu abụọ ahụ na-ejikọta ọnụ mgbe niile. Ọmụmaatụ, na-akawanye njọ na arụmọrụ ụlọ akwụkwọ nwere ike jikọta ọnọdụ n'ime ezinụlọ.
2. Ịga ụlọ akwụkwọ ịzụ ụmụ
Ụmụaka na-amalite njem mmụta na nchọpụta n'oge nwata, njem na-aga n'ihu na ndụ. Ya mere, ndị nna na ndị nne nwekwara ike ịrụ ọrụ nke ụmụ akwụkwọ. Site n'echiche a, ha na-enweta akụrụngwa, nka, ihe ọmụma, ikike na ngwaọrụ ọhụrụ. Ịga ụlọ ọrụ nkuzi maka ndị nna na ndị nne bụ ahụmahụ a ga-eburu n'uche. Ọzụzụ bara uru iji ọgụgụ isi mmụọ kụziere ihe.
3. Na-akwalite nkwalite dị mma gbadoro anya na mbọ
Nsonaazụ nke ule na-egosi nleba anya. Mana nkwado dị mma ekwesịghị ilekwasị anya naanị na nsonaazụ. Mgbalị ahụ n'onwe ya kwesịrị nkwado. Ikekwe mmadụ chọrọ oge ka ukwuu iji ruo ihe mgbaru ọsọ. Ma ị nwere ike ịhụ nsonye na nso nso nke ndị ị hụrụ n'anya.
4. Kwalite nzukọ na akwụkwọ n'ụlọ
Kedu ka esi akpọlite ​​ịhụnanya maka ịgụ akwụkwọ na nwata na oge uto? Ọ dị mma iji kpalie gị site na ihe atụ nke gị kwa ụbọchị. Ndị nna na ndị nne na-azụlite àgwà nke ịgụ ihe na-egosi enyo nke ụmụ ha ga-eji na-ele onwe ha anya. N'otu ụzọ ahụ, ọ bụ ihe amamihe na welie ọrụ nke akwụkwọ ahụ gafere mpaghara ọmụmụ. Ha nwekwara ike ịnọ n'ime ụlọ.
Ọ dị mma ịkwalite mmekọrịta na omenala n'okwu nka dị iche iche: sinima, foto, nka, egwu, ihe nkiri ...
5. Chọọ ihe ngwọta
Ọdịda ụlọ akwụkwọ anaghị eme ozugbo, mana ọ nwere ike igosi usoro. N'ihi nke a, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịbanye n'ime ọnọdụ ahụ iji ghọta ihe na-eme. Na, kwa, iji nyochaa ụzọ nkwado dị iche iche.
Dịka ọmụmaatụ, nwa akwụkwọ ahụ nwere ike ịchọ klaasị mmezi iji kwalite akara ule ha na isiokwu. Ma eleghị anya, ọ dị gị mkpa ịmụta àgwà ọmụmụ iji weta mgbanwe dị mma na usoro agụmakwụkwọ. Ị nwere ike ịdị mkpa iji usoro ọmụmụ ọhụrụ.
Mgbe ụfọdụ, nsonaazụ agụmakwụkwọ na-akawanye njọ na-emetụta ùgwù onwe onye nke nwa akwụkwọ ahụ. Ọkwa nke ntụkwasị obi onwe ha na-ebelata ma ha na-atụ anya ihe ga-eme n'ule na-abịanụ. Ya mere, nkwado nke ọkachamara n'akparamàgwà mmadụ pụrụ ịbụ isi.
6. Soro na-achọ ọrụ aka
Mgbe mmadụ na-amụ isiokwu masịrị ya, ọ na-enwe mmetụta nke mkpali karịa mgbe ọ na-abanye n'ime ọdịnaya nke na-agwụ ya ike. Ịchọ ọrụ aka bụ akụkụ nke introspection na ihe ọmụma onwe onye. Mana ọ bụghị naanị mmadụ na-achọpụta ihe jikọrọ ya na onwe ya. ọ ga-ekwe omume nye aha onye ọrụ site na enyemaka na nkwado nke ndị nkuzi na ezinụlọ. Ọ dị mma ịghara ịtụ anya na ọ ga-eduzi nzọụkwụ ya n'otu ụzọ. Ọ ga-enwerịrị ike ịmalite na nnwere onwe ịchọpụta ozi nke ya.
Ya mere, igbochi ọdịda ụlọ akwụkwọ site n'ụlọ bụ ebumnobi dị mkpa. N'aka nke ọzọ, ndị nne na nna na ndị nkụzi nwere ike ime ihe dị ka otu zuru oke dị n'otu. Ya mere, ọ dị mkpa ịnọgide na-enwe nkwurịta okwu mgbe nile site na ọwa dị iche iche dị. Ọ bụ ezie na ọ pụkwara ịdị mkpa ịchọ enyemaka pụrụ iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nhazi na ọmụmụ ihe » Noticias » Atụmatụ » Gbochie ọdịda ụlọ akwụkwọ n'ụlọ
Akwụkwọ akụkọ dijitalụ: gịnị ka ọ bụ